Isniin, November 18, 2019 Talaado, Nofeembar 19, 2019 Douglas Karr
Xawaaruhu waa barxad awood u leh codsiyada daruuraha ee ka soo guuritaanka xogta illaa xafiiska isku-dhafka, iibinta omnichannel iyo adeegga mobilada iyo falanqaynta.
Bishii Ogosto ee la soo dhaafay waxaan wax ka qoray shaqadayda cusub ee Patronpath. Tani waxay caqabad ku ahayd 8 bilood Patronpath laakiin ganacsigu wuu iska caddaynayaa marar badan. Rubucayaga koowaad wuxuu ka weynaa sanadkii hore macaamiisheenuna waxay leeyihiin kobcitaan laba-godle gudaha ah iyagoo adeegsanaya xalalkeena suuq geynta iyo ganacsiga. Xalay, waxaan ku guuleysanay Abaalmarinta Mira ee Shirkadda Teknolojiyada Macluumaadka Indiana Gazelle! Qaybta ugu adag ee dadaalkayagu waa, illaa iyo hadda, la qabsiga Makhaayadaha